Zaila Corridor 60 km oo kaliya ayey u jirtaa Xadka halka Berbera u jirto 240 km xadka Ethiopia iyo Somaliland ganacsiguna waxa uu ku faa’idaa meherada ugu dhow ee baahida dabooli karta !! Dr.Khadar-Libaaxley. | Salaan Media
Zaila Corridor 60 km oo kaliya ayey u jirtaa Xadka halka Berbera u jirto 240 km xadka Ethiopia iyo Somaliland ganacsiguna waxa uu ku faa’idaa meherada ugu dhow ee baahida dabooli karta !! Dr.Khadar-Libaaxley.
NM Gobolada Awdal iyo Saaxil waa xeebaha ugu dhaw Ethiopia dhanka Somaliland iyo somalia Xuduuda labada dal ee Somaliland iyo Ethiopia badka ay u jiraan biyaha bada.
1. Berbera illaa wajaale 240 km
2. Borama illaa Lughaya ( Borama xadka ayey ku taalaa ) 120 km
3. Xariirad illaa Zaila corridor 85 km
4. Geestiir illaa Zaila corridor 60 km